Liverpool ayaa jabisay sharciga xakamaynta xanuunka Korona Fayras, kaddib markii ay u ogolaatay xiddigeeda Mohamed Salah inuu kusoo laabto shan maalmood kaddib markii baadhitaankii lagu sameeyey lagaga helay xanuunka Korona Fayras.
Salah oo ay da’diisu tahay 28 jir ayaa kusoo laabtay tababarka Liverpool Isniintii toddobaadkan, waxaanu ciyaarayaa kulanka Atalanta ay caawa ku martigelinayaan ee tartanka Champions League inkasta oo uu seegay ciyaartii Leicester City ee Arbacadii.
Laacibkan oo uu xanuunku ku dhacay isaga oo ku maqan ciyaarihii caalamiga ahaa oo aanu xataa calfanin inuu waddankiisa Masar u ciyaaro, kaddib markii uu ka qayb-galay arooska walaalkii ka hor intii aanu qarankiisa tababarka la bilaabin.
Baadhitaankii ka horreeyey ee xidhiidhka kubadda cagta Masar ku sameeyey ka hor intii aanu tababarkii dabayaaqada toddobaadkaas la samaynin xiddigaha qarankiisa ayaa waxa lagu ogaaday inuu hayo xanuunkani.
Sharciga Premier League u dejiyey xakamaynta xanuunkan iyo ciyaaryahannada laga helo xanuunka ayaa waxa uu sheegayaa in ciyaartoy kasta iyo qof kasta oo kale uu muddo toban maalmood ah karantiil ku jiro laga bilaabo shaybaadhkiisa ugu horreeya ee xanuunka lagaga helo.
Sida uu ku warramay wargeyska The Sun ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska, Liverpool ayaa qodobkan meel iska dhigtay, isla markaana u ogolaatay Salah inuu shan maalmood oo kaliya maalintii la diiwaangeliyey xanuunkiisa uu kusoo laabto tababarka, iyadoo waliba diyaarad khaas ah lagaga soo qaaday Masar.
Layaabka dhacay ayaa waxa uu yahay in Salah oo xanuunkan laga helay Arbacadii uu Isniintii kasoo xaadiray tababarka, taas oo ka hor imanaysa qodobka sheegaya inuu 10 maalmood karantiil ku jiro.
Laakiin Liverpool ayaa ku sababaysay in laacibkeedani uu soo laabto in uu baadhitaankii ugu dambeeyey badqab kaga noqday xanuunkan, isla markaana ay UEFA marisay Salaasadii baadhitaan kale oo isaguna badqab ka dhigay.
Arrinta dooddu ka taagan tahay ayaa ah sababta Liverpool oo ogsoonayd in sharcigu dhigayo in 10 maalmood uu ciyaartoyga laga helo xanuunkan uu ku jiro karantiil, in ay haddana Isniintii kusoo dedejisay Mohamed Salah inuu yimaaddo xarunta tababarka ee AXA, iyadoo uu ciyaartoyda kalena halkaas tababarka kula sameeyey.
Dawladda UK ayaa iyadana sharciga ay xanuunkan ku xakamaynayo uu leeyahay: “Haddii lagaa helo calaamadaha xanuunka, tobanka maalmood waxay ka bilaabmayaan markii ay bilaabmeen (calaamaduhu). Laakiin haddii aanad calaamado lahayn, 10ka maalmood waxay ka bilaabmayaan marka baadhitaanka ugu horreeya lagugu sameeyo.”
Mohamed Salah ayaa arrin kale ay dooddiisu keenaysaa. Maalmintii lagu sameeyey baadhitaankii ugu horreeyey ee xanuunka lagaga helay ayaa ahayd November 13, waana 10 maalmood ka hor maalinta uu tababarka kusoo laabtay, balse baadhitaanka labaad ee doodda keenay ayaa ah in Arbacadii laga helay xanuunka isla markaana uu shan maalmood kaddib kusoo laabtay tababarka taas oo abuuraysa shaki hor leh.
Si kastaba, doodda ka taagan arrinta Mohamed Salah ayaan wali dhinacna u dhicin, waxaanay dadku falanqaynayaan ciqaabta ay mudan karayso haddii lagu helo in ciyaartoygeedan ay kusoo dedejisay tababarka iyadoo shan maalmood oo kaliya ka hor uu hayey xanuunku.